Dabaqa alwaax ah, alwaax aan biyuhu lahayn, alwaax marineed oo dahaaran - Yige Wood
Filimka Wajahan Plywood
Shirkaddayadu waxay dabooshaa aag ah 1.2 milyan oo mitir oo laba jibbaaran, waxaanu leenahay 100,000 m3 / awoodda alwaaxyada alaabta guriga, 300,000 m3 / awoodda DIFFENBACHER khadka saxaafadeed ee joogtada ah iyo in ka badan 50 mashiinnada goos goos ah
Alaabtayadu waxay dhaafeen iso9001, ISO 4001, shahaado CARB, waxayna leeyihiin in ka badan 20 shatiyo. Waxaa jira in ka badan 1,200 shaqaale xirfad leh iyo farsamo, iyo in ka badan 60 shaqaalaha injineernimada iyo farsamada.
Shirkaddayadu waxay ku jirtay warshadaha alwaax ku salaysan in ka badan 20 sano waxayna leedahay meel kaynta ah 3 milyan oo mitir oo laba jibbaaran. Bixinta alaabta ceeriin ayaa ah mid aad u deggan oo hubinta tayada leh.
20 sano oo waayo-aragnimo wax-soo-saar ah Shiinaha soo saarista ...
Jumlo Ganacsi oo raqiis ah oo aan biyuhu lahayn
Soosaarayaasha alwaaxda ah ee xirfadleyda ah ee jaban oo wanaagsan ...
4x8x1-35mm okoume/poplar/sapele ayaa soo wajahday tayada a...
Alaabtu waxay leeyihiin shahaadooyin ISO 9001, ISO 4001 iyo CARB. Hadda waxaan daboolnaa aag ah 1.2 milyan oo mitir oo laba jibbaaran, 1200 shaqaale xirfad leh iyo in ka badan 60 injineero.
Guangxi Hengxian Yige Wood Co., Ltd waxay ku taal beerta warshadaha ee kaynta casriga ah, Gobolka Hengxian, Gobolka Guangxi, Shiinaha. Beerta warshadaha, waxaanu leenahay warshad alwaax ah oo leh 6 khadadka wax soo saarka iyo 60,000 m3 / awoodda alwaax alaabta guriga; mid 300,000 m3Awooda sanadka DIFFENBACHER khadka saxafada joogtada ah kaas oo soo saari kara particleboard, OSB iyo OSB dusha sare; iyo in ka badan 50 mashiino gooyay oo rotary ah kuwaas oo siinaya maraqa qallalan oo tayo sare leh oo cabbirro kala duwan leh.
Tababarka farsamada aqoon-is-weydaarsiga Oktoobar 2021
Farqiga u dhexeeya guddiga cufnaanta iyo guddiga qayb
Hongqi Linzhan, Shitang Forest Farm, Shitang Town, Nanning, Guangxi, Shiinaha